July 2018 | Save A Train
ọnwa: July 2018
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali banyere njem na Europe bụ na i nwere ike inwe na e jiri ụgbọ okporo ígwè n'ebe nile. Ọ bụ ihe kasị zuru ebe nile pụtara nke iga na ọtụtụ ndị mmadụ si mmasị ịga Afrika. Ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ ụfọdụ tupu ha na-ekpebi na-…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Student Travel Site Train na Europe nwere ike bụghị nanị na-enwe fun, ma izi na ịnọ, oke. Ọbụna ihe ka mkpa na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ (na nne na nna) adịkarịghị na-eche nke bụ ihe niile bara uru, ndụ management nkà ụmụ akwụkwọ mkpa ịmụta iji ghọọ nọọrọ onwe ha, onwe-eduzi, ọrụ,…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ọ bụrụ na nke a bụ gị oge mbụ njem ụgbọ okporo ígwè, e doro anya na ọ ga-nke mbụ n'ime ọtụtụ. n'eziokwu, onye ọ bụla nke e nyere njem ụgbọ okporo ígwè ohere wee mebie ara ya! Gịnị? N'ihi na ọ bụ ebube! N'adịghị ka ihe na-abụghị onye ụgbọelu agafe, iru ala ụgbọ ala tours, ma ọ bụ…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ina njikere na-blown pụọ na Italy ụgbọ okporo ígwè site na oge ị na kwụpụ ụkwụ n'elu ya oké ala. The n'ala akụkọ ihe mere eme, ebube ije, omenala karịrị akarị, na ndị dị otú ahụ mara, ọkaibe, ndị na-akpa ezigbo àgwà ga-abụ ihe ị ga-echeta ruo ụbọchị ikpeazụ gị!…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Iji na-enweta Holland Tulip Season site Train bụ n'ezie a kwesịrị ọ bụla-akwanyere onwe okpomọkụ njem kalenda. N'ihi na a ọnwa ma ọ bụ otú ọ bụla n'afọ, ubi nke ógbè Flevoland na-ghọọ a mara mma ma na oké osimiri nke yi okooko osisi nke karịa 7…